In kabadan 100 xildhibaan oo saxiixay mooshin ku saabsan metelaada Muqdisho – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
In kabadan 100 xildhibaan oo saxiixay mooshin ku saabsan metelaada Muqdisho
Waxaa xaruunta Villa Hargeysa ka socda kulan ay leeyiheen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo ah kulankii 8-aad ee kalfadhigan toddobaad.
Ajendaha kulanka maanta ayaa ah ka doodista xeerka metelaada magaalada Muqdisho ay ku yelaneyso golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dodda ajendaha oo soo bilaabatay shalay ayaa halkeedii laga sii waday maanta, waxayna xildhibaano badan oo golaha ka tirsan aad uga soo horjeedaan in metelaada caasimadda ay noqoto 7-kursi, taas oo maanta sababtay in mudanayaasha qaar ay diyaarinayaan mooshin de deg ah oo ku saabsan metelaada Muqdisho.
Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi oo la hadalay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo gaaraya in ka badan 100 mudane ay saxiixeen mooshin lagu dalbanayo in metelaada uu gobolka Banaadir ku yeelanayo Aqalka Sare la gaarisiiyo 13 kursi.
Xildhibaanka ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan daacad ka aheyn dalabkii uu ka hor jeediyay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee kaliya ay aheyd mid siyaasadeed, waxaana uu intaas ku daray in madaxtooyadu ay hada gadaal ka riixeyso in baarlamaanka uu furo qodobka 72-aad ee dastuurka si qodobada qaar ee madaxtooyada ay daneyneyso iyana wax ka badel loogu sameeyo.
Arinta metelaada caasimadda ayaa kamida afar qodob oo dhameystiraya xeerka doorashoyinka Qaranka oo barlamaanka loo gudbiyey, kuwaas oo durbaba laba ka mid ah la meel mariyey, waxayna kala yihiin xeerka qoondada haweenka iyo asteynta kuraasta gobollada waqooyi ee Somaliland.
Arrinta xusida mudan ayaa ah in aysan weli cadeyn nuuca doorasho ee dalka ka dhaceysa, hasa ahatee madaxda dowlada federaalka ayaa ku adkeysanaya inay dalka ka dhaceyso doorasho qof iyo cod ah.
Previous Cabdi Xaashi: Nuqul xeer doorasho oo aan sax ahayn ayaa la horgeeyey G/Shacabka
Next Senator Jawaahir “warqada maanta ka soo baxday guddoomiye Cabdi Xaashi waa sharci daro”.